UYIFUMANA PHI KWAYE PHI INDAWO YOKUTHENGA IHEDERA HASHGRAPH (HBAR) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye phi indawo yokuthenga iHedera Hashgraph (HBAR) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 3: Dlulisela i-BTC kwi-Altcoin Exchange
Inyathelo 5: Urhwebo HBAR
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-HBAR ngokukhuselekileyo kwii-wallet zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lweHBAR
IHedera izichaza njengenethiwekhi yoluntu egunyazisiweyo apho abaphuhlisi banokwakha izicelo ezikhuselekileyo, ezifanelekileyo kunye nemvumelwano yexesha lokwenyani. Iqonga lelakhe kwaye lilawulwa libhunga lamalungu ehlabathi kubandakanya u-Avery Dennison, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL ), Wipro, kunye neZain Group.
Inkonzo yeHedera Consensus Service (HCS) isebenza njengombala wokuthembela waso nasiphi na isicelo okanye inethiwekhi evunyelweyo kwaye ivumela ukwenziwa kwemiyalezo engaguquguqukiyo nengqinisisekayo yemiyalezo. Imiyalezo yesicelo ingeniswe kwinethiwekhi yeHedera ukuze kuvunyelwane ngayo, inikwe isitampampi ethembekileyo, kwaye iyalelwe ngokufanelekileyo. Sebenzisa i-HCS ukulandela umkhondo weasethi kudweliso lwentengiso, yenza izigodo eziphicothiweyo kwimisitho yentengiso, okanye uyisebenzise njengenkonzo yoku-odola ngokusasazwa.
Ixabiso langoku le-HBAR yi- $ 0.11 kwaye ikwindawo ye-49 ngaphandle kwe-100 yeedigital cryptocurrencies kwiCoinmarketcap kwaye kutshanje inyuse i-34.65 yepesenti ngexesha lokubhalwa.
I-HBAR idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala uthenge i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-HBAR .
I-Coinbase yenye yezona ndawo zinkulu zotshintshiselwano nge-crypto ezamkela iidisithi ze-fiat. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukuze ubhalise kwi-Coinbase kwaye uyakufumana inani lasimahla le- $ 10 yexabiso le-BTC emva kokuthenga i-cryptos eyi- $ 100.
Chwetheza imeyile yakho kwaye ucofe 'Qalisa'. Qiniseka ukuba unikezela ngegama lakho lokwenyani njengoko iCoinbase izakulidinga ukuqinisekisa iakhawunti. Khetha iphasiwedi eyomeleleyo ukuze iakhawunti yakho ingabinabungozi kwabagculeli.
Landela inyathelo elilandelayo ukugqiba isazisi sakho. La manyathelo ayothusa ingakumbi xa ulinde ukuthenga iasethi kodwa njengawo nawaphi na amanye amaziko emali, iCoinbase ilawulwa kumazwe amaninzi anjengeMelika, i-UK ne-EU. Unokuthatha oku njengorhwebo usebenzisa iqonga elithembakeleyo ukwenza ukuthenga kwakho kwe-crypto kuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba yonke into ebizwa ngokuba Yazi-abaThengi bakho (i-KYC) ngoku iyazenzekela kwaye ayifanelanga kuthatha ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ukuyigqiba.
Nje ukuba ugqibile inkqubo ye-KYC. Uya kucelwa ukuba ungeze indlela yokubhatala. Apha unokukhetha ukubonelela ngekhadi letyala / lokuthenga okanye usebenzise ugqithiselo lwebhanki. Uya kuhlawuliswa imali ephezulu xa usebenzisa amakhadi kodwa uya kwenza ukuthenga kwangoko. Ngelixa ukuhanjiswa kwebhanki kungabizi kakhulu kodwa kuhamba kancinci, kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, amanye amazwe aya kubonelela ngedipozithi yemali ekhawulezileyo ngentlawulo ephantsi.
Ngoku usete, cofa iqhosha u 'Trade' ngasekhohlo phezulu, khetha iBitcoin kwaye uqinisekise ukuthengiselana kwakho ... kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga kwe-crypto.
Unokufaka isicelo kwikhadi le-UpHold Debit apho unokuchitha khona ii-asethi ze-crypto kwiakhawunti yakho njengekhadi ledebhithi eliqhelekileyo! (I-US kuphela kodwa iya kuba se-UK kamva)
Kukho ukulinganiselwa kokuthenga / ukuthengisa ii-odolo zabasebenzisi abaphambili
Landela inyathelo elilandelayo ukugqiba isazisi sakho. La manyathelo ayothusa ingakumbi xa ulinde ukuthenga i-asethi kodwa njengawo nawaphi na amanye amaziko emali, i-UpHold ilawulwa kumazwe amaninzi anjenge-US, i-UK ne-EU. Unokuthatha oku njengorhwebo usebenzisa iqonga elithembakeleyo ukwenza ukuthenga kwakho kwe-crypto kuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba yonke into ebizwa ngokuba Yazi-abaThengi bakho (i-KYC) ngoku iyazenzekela kwaye ayifanelanga kuthatha ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ukuyigqiba.
Nje ukuba ugqibile inkqubo ye-KYC. Uya kucelwa ukuba ungeze indlela yokubhatala. Apha unokukhetha ukubonelela ngekhadi letyala / lokuthenga okanye usebenzise ugqithiselo lwebhanki. Unokuhlawuliswa imali ephezulu ngokuxhomekeke kwinkampani yekhadi lakho letyala kunye namaxabiso aguquguqukayo xa usebenzisa amakhadi kodwa uya kwenza ukuthenga kwangoko. Ngelixa ukuhanjiswa kwebhanki kungabizi kakhulu kodwa kuhamba kancinci, kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, amanye amazwe aya kubonelela ngedipozithi yemali ekhawulezileyo ngentlawulo ephantsi.
Ngoku konke kusetiwe, kwiscreen se 'Transact' phantsi kwentsimi ethi 'Ukusuka', khetha i-fiat currency yakho, emva koko kwicandelo 'To' ukhethe iBitcoin, cofa kuqala ukujonga ukuthengiselana kwakho kwaye ucofe uqinisekise ukuba yonke into ibonakala intle. .. kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga kwe-crypto.
Khetha i-altcoin exchanges:
Kodwa asikenziwanga okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBinance njengotshintshiselwano lwethu. I-Binance lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
reaction navigation susa okubhaliweyo okuphezulu
Emva kokudlula kwinkqubo efanayo njengoko senzile ngaphambili ngeCoinbase, uya kucetyiswa ukuba usete uqinisekiso lwe-2FA, uligqibe njengoko longeza ukhuseleko kwiakhawunti yakho.
Kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo yotshintshiselwano unokucelwa ukuba ugqibe kwenye inkqubo ye-KYC, oku kuya kuhlala kukuthatha ukusuka kwimizuzu engama-30 ukuya kwiintsuku ezimbalwa ubuninzi. Nangona inkqubo kufuneka iqonde-phambili kwaye kube lula ukuyilandela. Nje ukuba ugqibile ngayo kufuneka ube nokufikelela ngokupheleleyo kwisipaji sakho sokutshintshiselana.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona uthotho lweenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eBinance kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Ngoku buyela kwiCoinbase, yiya kwiphepha lePotifoliyo kwaye ucofe kwi-BTC kuluhlu lwakho lweeasethi, emva koko ucofe u-'Thumela 'ngasekunene.
Ngaphantsi kwendawo yomamkeli, cola idilesi yesipaji kwibhodi yakho yokunamathisela, ukuze uqwalasele ukhuseleko kuya kufuneka ujonge ukuba zombini iidilesi ziyahambelana. Kuyaziwa ukuba kukho i-malware ethile yekhompyuter eya kuguqula umxholo kwibhodi yakho yokunamathisela kwenye idilesi yesipaji kwaye uya kuthi uthumele imali komnye umntu.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya eBinance!
Ngoku buyela ku-Binance kwaye intloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela kwi-Binance nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela kwiBinance, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kwikholamu elungileyo kukho ibha yokukhangela, ngoku qiniseka ukuba 'i-BTC' ikhethiwe njengoko sithengisa i-BTC kwi-altcoin pair. Cofa kuyo kwaye uchwetheze 'HBAR', kuya kufuneka ubone iHBAR / BTC, ukhethe eso sibini kwaye kuya kufuneka ubone itshathi yexabiso le-HBAR / BTC embindini wephepha.
Apha ngezantsi kukho ibhokisi eneqhosha eliluhlaza elithi 'Thenga i-HBAR', ngaphakathi kwebhokisi, khetha ithebhu 'yeNtengiso' apha njengoko lolona hlobo luhamba phambili lokuthenga iiodolo. Unokuchwetheza kwisixa sakho okanye ukhethe ukuba yeyiphi na indawo oyithandayo ongayisebenzisa ekuthengeni, ngokunqakraza kumaqhosha eepesenti. Xa sele uqinisekisile yonke into, cofa 'Thenga iHBAR'. Voila! Ekugqibeleni uthenge iHBAR!
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iGate.io njengotshintshiselwano lwethu. UGate.io lutshintshiselwano oludumileyo lokurhweba ii-altcoins kwaye linenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
UGate.io lutshintshiselwano lwemali yaseMelika yedijithali esungule i-2017. Njengoko utshintshiselwano lungumMelika, abatyali zimali baseMelika banokuthi bathengise apha kwaye sicebisa abathengisi baseMelika ukuba babhalise kolu tshintshiselwano. Olu tshintshiselwano luyafumaneka ngesiNgesi nangesiTshayina (eyokugqibela iluncedo kakhulu kubatyali mali baseTshayina). Eyona nto iphambili yokuthengisa yiGate.io kukhetho lwabo olubanzi lwezibini zorhwebo. Unokufumana uninzi lwee-altcoins ezintsha apha. UGate.io ukwabonisa ivolumu yokurhweba enomtsalane. Phantse yonke imihla yenye yeendawo zokutshintshiselana ezingama-20 ezinezinga eliphezulu lokurhweba. Ixabiso lokuthengisa lifikelela kwi-approx. I-USD 100 yezigidi mihla le. Ezona zibini ziphambili kurhwebo kwi-Gate.io ngokwevolumu yokuthengisa zihlala zine-USDT (iTether) njengenxalenye enye yezi zibini. Ke, ukushwankathela oku kungasentla, inani elikhulu leGate.io lokurhweba ngababini kunye nokuthengiswa kwayo okungaqhelekanga zizinto zombini ezinomtsalane kolu tshintshiselwano.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eGate.io kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele iimali. Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u-'Thumela 'ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya eGate.io!
Ngoku buyela eGate.io kwaye uye kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela kwiGate.io nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela eGate.io, emva koko uye 'kutshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
urhoxe kwi-coinbase ukuya kwi-paypal
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa i-Huobi njengotshintshiselwano lwethu. IHuobi lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
U-Huobi kwasekuqaleni utshintshiselwano nge-Chinese crypto. Ukusuka kwinto ebonakala ngathi, ngoku ibhalisiwe eSeychelles. Olu tshintshiselwano yenye yeendlela ezintandathu zokutshintshiselana ezivela eSeychelles. Ukuthengiswa kweHuobi kuyamangalisa. Ukuthengiswa, kunye nenkxaso yabathengi evulekileyo iiyure ezingama-24 ngosuku iintsuku ezingama-365 ngonyaka kunye nokhuseleko olulungileyo. Ukuba ubhalisela i-Huobi usebenzisa ikhonkco lethu elingezantsi, uya kufumana uthotho lweebhonasi zamkelekile, ngolu hlobo lulandelayo: 1. I-USDT 10 xa ubhalisile kwaye waqinisekisa iprofayile yakho, 2. I-USDT 50 xa ufake / uthenge i-100 yeedola ezixabisa amathokheni ngeHuobi OTC, kunye no-3. Ithuba lokuya kuthi ga kwi-USDT 60 xa ugqibile ubuncinci be-100 USDT yokurhweba nge-crypto-to-crypto. UHuobi akavumeli abatyali zimali baseMelika kutshintshiselwano lwabo.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eHuobi kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya eHuobi!
Ingcaciso yomfanekiso wenkunkuma kwi-intanethi
Ngoku buyela kuHuobi kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela eHuobi nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela kuHuobi, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iLiquid.com njengotshintshiselwano lwethu. I-Liquid.com yindawo yotshintshiselwano eyaziwayo yokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
I-LIQUID lutshintshiselwano oluthembekileyo, kunye nesebe leshishini laseJapan elinelayisensi kwaye lilawulwa yiArhente yeeNkonzo zezeMali yaseJapan. Banerekhodi elungileyo yokuhlala bethobela imithetho kunye nemigaqo, ukuya kuthi ga ngoku kususwa phantse ii-asethi ezingama-30 kulo nyaka ukwenza oko. Abatyalomali base-US banokuthengisa kuphela i-crypto-to-crypto (kwaye hayi i-fiat-to-crypto) apha. Isizathu esiphambili sokungabandakanyi abatyali mali baseMelika kurhwebo lwe-fiat-to-crypto kusemthethweni.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eLiquid.com kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele iimali. Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya eLiquid.com!
Ngoku buyela kuLiquid.com kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwi-Liquid.com xa i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela kuLiquid.com, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBittrex njengotshintshiselwano lwethu. IBittrex lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
IBittrex lutshintshiselwano olusekwe eSeattle oluqale ukusebenza ngoFebruwari 2014. Kwakukho unaniselwano oluncinci phaya ngaphandle kunokuba lukho namhlanje. IBittrex isazibona iyinkokeli yehlabathi kuguquko lwe-blockchain revolution. Babhekisa kwiqonga layo njengeqonga labantu abafuna ukwenziwa ngokukhawuleza kwezorhwebo, izipaji ezikhuselekileyo zedijithali kunye neendlela eziphambili zeshishini. IBittrex ikwasebenza njengeBlockchain Incubator, nto leyo ethetha ukuba - ukuze bakhuthaze ubugcisa kwihlabathi liphela - basebenze namaqela kwihlabathi liphela ukunceda amathokheni amatsha anokukwazi ukutshintsha indlela ezilawulwa ngayo izinto, iinkonzo kunye nokusebenza kwihlabathi. IBittrex yenye yezona ndawo zaziwayo zotshintshiselwano eMelika. Njengoko zizinze eMelika, zikwavumela abatyali zimali baseMelika kumazwe amaninzi. Melika ngeendlela ezininzi umlawuli we crypto ngoku. Inenani elikhulu kakhulu lamaqonga kunye nenxalenye enkulu yorhwebo lwe-crypto yemihla ngemihla lwenzeka kutshintshiselwano lwaseMelika okanye kolunye utshintsho kodwa lubandakanya abarhwebi baseMelika.
uyithengisa njani isafemoon yam
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eBittrex kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u-'Thumela 'ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya eBittrex!
Ngoku buyela eBittrex kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela eBittrex yakuba iBTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela eBittrex, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-HBAR yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-HBAR ingathengiswa, apha siza kusebenzisa i-OKEx njengotshintshiselwano lwethu. I-OKEx lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
I-OKEx lutshintshiselwano nge-crypto olwalusekwe ngaphambili eHong Kong. Ngokwolwazi olunikezwe ngokuthe ngqo kutshintshiselwano kuthi, ngoku lusekwe eMalta. IMalta ikunye ne-Estonia kunye neGibraltar elinye lamazwe ambalwa eYurophu aneemfuno zelayisensi ezicacileyo zokutshintshiselana nge-crypto. Xa iMalta ikhupha iimfuno zelayisensi zotshintshiselwano nge-crypto, uninzi lotshintshiselwano oluvela kwezinye iindawo zehlabathi lufudukele eMalta. Abatyalomali base-US abanakho ukurhweba kolu tshintshiselwano. Ke ukuba ungumtyali-mali wase-US kwaye ufuna ukurhweba kwi-OKEx, kuya kufuneka uphinde uqwalasele indawo okhetha kuyo indawo yokurhweba kwaye ukhethe enye yezona ndawo ziphambili zotshintshiselwano nge-crypto.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC e-OKEx kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iinkozo zakho zemali zisendleleni eya ku-OKEx!
Ngoku buyela ku-OKEx kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwi-OKEx xa i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-HBAR!
Buyela ku-OKEx, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba iHBAR idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
c ++ isifundo sokubonisa studio
I-BitMart lutshintshiselwano nge-crypto ukusuka kwiiCayman Islands. Ifumaneke eluntwini ngo-Matshi 2018. I-BitMart ine-liquidity enomdla ngokwenene. Ngexesha lokuhlaziywa kokugqibela kolu hlaziyo (20 kweyoKwindla 2020, kanye embindini wengxaki kunye ne-COVID-19), ivolumu yokurhweba ngeyure ezingama-24 zeBitMart yayiyi-USD 1.8 yezigidigidi. Eli xabiso libeke iBitMart endaweni no. 24 kucoinmarketcap kuluhlu lotshintshiselwano ngeeyure eziphezulu ezingama-24 zokuthengisa. Akufuneki ukuba, ukuba uqala ukurhweba apha, awuzukuba nexhala malunga nencwadi yoku-odola. Uninzi lotshintshiselwano alubavumeli abatyali zimali abavela e-USA njengabathengi. Ngokwazi kwethu, i-BitMart ayisiyiyo enye yazo. Nabaphi na abatyali mali baseMelika abanomdla kurhwebo apha kufuneka nakweyiphi na imeko benze olwabo uluvo kuyo nayiphi na imiba evela kubumi babo okanye ukuhlala kwabo.
Yaziswa ngo-Epreli 2018, i-MXC yindawo ephakathi yokutshintshiselana kwemali yedijithali ebhaliswe eSeychelles. Ixhasa i-CNY, i-VND, i-USD, i-GBP, i-EUR, idiphozithi ye-AUD, kunye ne-CNY, ukurhoxa kwe-VND. Ngokwazi kwethu, abatyali mali baseMelika banokuthengisa kwi-MXC. Inika urhwebo ngeengqekembe ezingama-242 kwaye inezibini ezingama-374 zokurhweba. Okwangoku akukho. 7 ngokweyona mali yeedigital ixhaswa kakhulu xa kuthelekiswa nolunye utshintsho lwentengiso ngokukaCoingecko. Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-MXC ikwi-TOP ye-Decentralized Finance (DeFi) kwaye ihlala isongeza inkxaso kwiimali zeDeFi.
Inkxaso ye-blockchains ezininzi kunye noluhlu olubanzi lweethokheni (ze-ERC-20 / BEP-20)
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-HBAR yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kwedilesi esidlangalaleni nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye ugcine ukhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Isipaji sehardware apha ngokuqinisekileyo lolona khetho lubhetele kwizipaji ezibandayo. Zihlala zizixhobo ezinikwe amandla i-USB ezigcina ulwazi oluphambili lwesipaji sakho ngendlela eyomelele ngakumbi. Zakhiwe ngokhuseleko kwinqanaba lomkhosi kwaye ii-firmware zazo zihlala zigcinwa ngabavelisi bazo kwaye ngenxa yoko zikhuselekile ngokugqithileyo. ULedger Nano S kunye noLedger Nano X kwaye zezona zikhetho zidumileyo kolu luhlu, ezi wallets zixabisa malunga ne- $ 50 ukuya kwi- $ 100 ngokuxhomekeke kwiimpawu abazinikelayo. Ukuba ubambe iiasethi zakho ezi wallets zityala imali ngokweembono zethu.
Ngenxa yobume bemali ye-imali yedatha- eyabelwe abasemagunyeni, oko kuthetha ukuba abasebenzisi banoxanduva lokuphatha iiasethi zabo ngokukhuselekileyo. Ngelixa usebenzisa isipaji sehardware ikuvumela ukuba ugcine ii-cryptos zakho kwindawo ekhuselekileyo, usebenzisa uqhagamshelo lwe-VPN ebhaliweyo ngelixa uthengisa kwenza kube nzima kubaduni ukuba babambe okanye baphakamise ulwazi lwakho olubuthathaka. Ngokukodwa xa uthengisa ekuhambeni okanye kudibaniso lweWifi yoluntu. I-NordVPN yenye yezona zihlawulwe kakhulu (qaphela: ungaze usebenzise naziphi na iinkonzo zasimahla zeVPN njengoko zinokufunxa idatha yakho ekubuyiseleni inkonzo yasimahla) Iinkonzo zeVPN phaya kwaye sele ikho phantse ishumi leminyaka. Inika unxibelelwano olufihliweyo kumgangatho wamasosha kwaye ungakhetha ukungena kwiibhloko ezinobungozi kunye neentengiso kunye nenqaku labo leCyberSec. Unokukhetha ukunxibelelana neeseva ezingama-5000 + kumazwe angama-60 + kwisiseko kwindawo okuyo, ekuqinisekisa ukuba uhlala unonxibelelwano olugudileyo nolukhuselekileyo naphi na apho ukhoyo. Akukho bhanwidth okanye imida yedatha ethetha ukuba ungayisebenzisa le nkonzo kwiindlela zakho zemihla ngemihla ezinje ngokuhambisa ividiyo okanye ukukhuphela iifayile ezinkulu. Kwaye iphakathi kwexabiso eliphantsi iinkonzo ze-VPN phaya (kuphela i-3.49 yeedola ngenyanga).
ISurfshark yeyona ndlela inexabiso eliphantsi ukuba ufuna unxibelelwano olukhuselekileyo lweVPN. Nangona iyinkampani entsha ngokuthe kratya, sele inamaseva angama-3200 + asasazwe kumazwe angama-65. Ngaphandle kweVPN ikwanazo nezinye izinto ezipholileyo kubandakanya i-CleanWeb ™, ethi ibambe iintengiso, abahloli, imalware kunye neenzame zobuqhetseba ngelixa ukhangela isikhangeli sakho. Okwangoku, iSurfshark ayinayo nayiphi na imida yesixhobo ukuze usisebenzise ngokusisiseko kwizixhobo ezininzi njengoko ufuna kwaye wabelane ngenkonzo nabahlobo bakho kunye nosapho. Sebenzisa ikhonkco lokungena apha ngezantsi ukufumana isaphulelo se-81% (okuninzi !!) kwi- $ 2.49 / ngenyanga!
I-IT nomads yenze i-Atlas VPN emva kokubona ukunqongophala kwenkonzo ye-notch ephezulu ngaphakathi kwe-VPNs yasimahla. I-Atlas VPN yenzelwe ukuba wonke umntu abe nokufikelela simahla kumxholo ongathintelwanga ngaphandle kwentambo. I-Atlas VPN imiselwe ukuba yeyokuqala ethembekileyo yasimahla i-VPN enezixhobo zobuchwephesha obuphezulu. Ngapha koko, nangona iAtlas VPN ingumntwana omtsha kwibhlokhi, iingxelo zeqela labo lebhlog ziye zagutyungelwa ziivenkile ezaziwayo ezinje ngeForbes, Fox News, Washington Post, TechRadar nabanye abaninzi. Apha ngezantsi kukho amanye amanqaku aphambili:
I-tracker blocker ifaka iibhloko eziyingozi, iyeka ikuki yomntu wesithathu ekulandeleleni imikhwa yakho yokukhangela kunye nokuthintela intengiso yokuziphatha.
Iiseva ezikhuselekileyo zikuvumela ukuba ube needilesi ezininzi ze-IP ezijikelezayo ngokudibanisa kwiseva enye
Amaxabiso aphezulu kwimarike yeVPN ($ 1.39 / ngenyanga kuphela)
Ngokuzenzekelayo bulala ukutshintsha ukuvimba isixhobo sakho okanye iiapps ekufikeleleni kwi-intanethi ukuba unxibelelwano aluphumeleli
Njengoko ufumana amava amaninzi ekuthengiseni i-cryptos kuya kusiba nzima ngakumbi xa kuziwa ekulandeleleni inzuzo yakho eyinkunzi kuyo yonke loo misebenzi, ngakumbi xa uneakhawunti ezininzi kumaqonga ohlukeneyo orhwebo. Irhafu isusa iintlungu zokulungiselela i-bitcoin kunye neerhafu zerhafu zexesha lakho lerhafu. Iyazenzekelayo yonke inkqubo yokufayilisha irhafu kwaye uya kuqiniseka ukuba awuyi kuphoswa naluphina ulwazi olubalulekileyo olufunekayo. Bhalisa ngokulula, gcwalisa ulwazi lwakho lomntu siqu, kwaye ungenise konke ukuthengiselana kwembali yedijithali kwiqonga. Idityaniswa ngaphandle komthungo kunye nakho konke ukutshintshiselana okukhulu kwemali yedijithali kunye namaqonga okwenza le nkqubo ikhawuleze ngokudibanisa iiakhawunti zakho ezikhoyo zotshintsho kwiqonga. Nje ukuba ukuthengiselana kungeniswe ngaphakathi, unokuvelisa iingxelo zakho zerhafu ngonqakrazo olumbalwa. I-CryptoTrader.Tax isimahla ukuba ungayisebenzisa kwaye ungaqala kwangoko kwangoko. Uya kudinga ukuhlawula kuphela ukuba ufuna ukuvelisa iingxelo zakho zerhafu.
Ndingayithenga i-HBAR ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-HBAR eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga i-HBAR okanye i-Bitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-HBAR ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Iinkonzo zeNgingqi yintengiselwano yeontanga ye-Bitcoin. Yindawo yentengiso apho abasebenzisi banokuthenga kwaye bathengise iBitcoins ukuya nokubuya komnye nomnye. Abasebenzisi, ababizwa ngokuba ngabarhwebi, benza iintengiso ngexabiso kunye nendlela yokubhatala abafuna ukuyinikela. Unokukhetha ukuthenga kubathengisi kwindawo ethile ekufutshane eqongeni. emva kwayo yonke indawo elungileyo ukuba uyokuthenga iBitcoins xa ungazifumani iindlela zakho zokuhlawula oyifunayo naphi na. Kodwa amaxabiso ahlala ephezulu kweli qonga kwaye kuya kufuneka wenze inkuthalo yakho efanelekileyo ukunqanda ukuqhathwa.
Funda ngakumbi kwiziseko zikaHedera Hashgraph kunye nexabiso langoku apha.
Imibuzo ye-sql yodliwanondlebe nefacebook
indlela yokusetha kwakhona iphasiwedi ye-imeyile yebellouth
indlela yokubiza iindlela ezivela kwelinye iklasi kwiJava
imibuzo yodliwanondlebe ge
Ultimatix isiqinisekiso sokukhuphela usetyenziso
feed-phambili inethiwekhi pytorch yenethiwekhi